Hebei Besttone Fashion Co., Ltd.oo la aasaasay 2005, waa shirkad xirfadeed oo dhammaystiran oo ganacsi oo isku dubarideysa cilmi baarista iyo horumarinta farsamada, dharka PU, dharka dharka, dharka iyo wax soo saarka dibadda. Shirkaddu waxay leedahay qaabeyn heer sare ah iyo koox soosaarid ah si loo hubiyo isdhexgalka dhow ee ka socda cilmi baarista iyo soo saarista.
Besttone waxaa loo qoondeeyay aagga cabashada muddo 20 sano ah, waxayna sameysay nidaam silsilad saad leh, isdhexgal iyo u adeegis macaamiil badan oo heer sare ah. Badeecadaha waxaa loo dhoofiyaa Yurub / Aasiya iyo Afrika iyo dalal kale. Waxay u korodhay xirfad-yaqaan, hal-abuurnimo iyo u janjeedha adeegga dhoofinta, taas oo ku guulaysatay amaanta loo dhan yahay ee macaamiil badan oo caan ka ah Yurub iyo Mareykanka, waxayna ku guuleysatay wanaag wanaagsan shirkadda.
Kadib markii ay isku dheceen xoog iyo tiknoolajiyad, waxaa la dhisay warshad ka mid ah Besttone lana soo saaray wax soo saar sanadkii 2017. Warshadani waxay ku taalaa magaaladii uu deganaa maareeyaha guud si ay ugu fududaato in la maareeyo. Waxay leedahay in kabadan 500 oo shaqaale ah, iyo 15 nooc oo ah khadadka waxsoosaarka horumarsan. Dhammaan mashiinnada khadadka wax soo saarka waxaa laga iibsadaa shirkadda qalabka xirfadleyda waaweyn, waxayna soo mareen tijaabooyinka caalamiga ah ee badbaadada iyo tayada. Sidoo kale waxay leedahay dhowr aqoon isweydaarsi wax soo saar oo madaxbanaan, sida qaab sameynta, goynta, tolida, dhameystirka, hubinta tayada iyo xirxirida, si warshada ay u soo saarto madax banaan una maamusho madaxbanaan. Shaqaale kasta oo khadadka wax soo saarka ku tababaran xirfadaha wax soo saarka iyo amniga si loo gaaro ujeedka adeegyada wax soo saarka adag. Kuwaas oo dhami waxay si weyn u hubin karaan alaabada tayada sare leh iyo waqtiga dhalmada degdega ah. Warshadu waxay isticmaashaa nidaamka maaraynta waxqabadka. Wax soo saar isku mid ah isla markaana si adag u mideeya nidaamka ka soo iibsiga, wax soo saarka ilaa baakadaha iyo gaadiidka oo ay soo saarto warshada Besttone lafteeda. Sidoo kale warshadu waxay aasaastay silsiladda nidaamka adeegga ugu fiican alaab-qeybiyeyaasha iyo gaadiidka.
Ka dib sanado badan oo xoog uruursi ah, isdhexgalka kheyraad badan oo tayo sare leh, hada, Besttone waxay si rasmi ah u soo gashay goob cusub - kahortagyada wax soo saarka dibada. Soosaarka oo ay kujiraan dharka dibada goods alaabada diirimaadka iyo faahfaahinta kale ee banaanka, sida galoofyada, garbasaarka, jilbaha, curcurka, suxulka, suxulka, maaskaro, maaskaro wajiga, boorsooyinka dhabarka, bacaha dhexda, bacaha gacanta, koofiyada diirran, bacda jiifka, silsiladda iyo wixii la mid ah dhammaan noocyada wax soo saarka difaaca dibadda. Dhammaan wax soo saarka ayaa la kulmi kara shahaadada heerarka caalamiga ah.
Iyada oo ku saleysan alaab tayo sare leh oo ay hagayso baahiyaha macaamiisha, Besttone waxay noqotay shirkad wax soo saar kala duwan oo isku dhafan dharka / dharka / alaabada banaanka. "Tayada adag ee aasaasiga ah, baahida macaamiisha sida hagaha, adeegga tayada sare leh ee ujeedadu tahay" Tani waa caddaynteenna joogtada ah ee shirkadda Besttone iyo shaqaale kasta oo Besttone ah waa inay raacaan. Waxaan aaminsanahay in mustaqbalka dhow, Hebei Besttone fashion Co., Ltd. uu noqon doono xiddig ifaya oo dunida ka ifaya.